सैँतीस हजारभन्दा बढी स्वाब परीक्षण गर्दा सुरक्षित रहेकी डा. नितु अधिकारी हाल आएर आफैँ सङ्क्रमित भएकी छिन् ।
भरतपुर अस्पतालद्वारा गत जेठमा सञ्चालित कोभिड–१९ प्रयोगशालाको नेतृत्व गर्दै आएकी डा. अधिकारी लामो समय सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहेको थिइन् ।
उनी गत साता सङ्क्रमित भएपछि होम आइसोलेसनमा छिन् । उनीसँगै श्रीमान् र आमासमेत सङ्क्रमित रहेको बताइएको छ । “निकै गाह्रो हुँदो रहेछ ।” टाउको, शरीर र छाती दुखेको छ, उनले भनिन् ।
भरतपुर कोभिड–१९ प्रयोगशालामा कार्यरत मेडिकल प्राविधिक आफू सुरक्षित भई काम गर्दा पनि सङ्क्रमित हुन पुगेको उनी बताउँछिन् । “पिपिइ सेट लगाउने, निरन्तर सरसफाइ गर्ने, प्रयोग भएका वस्तुको तत्काल र वैज्ञानिक हिसाबले निर्मलीकरण गर्ने गरिन्छ, यति गर्दा पनि सङ्क्रमित भएँ”, डा अधिकारीले भनिन् “कुनै पनि अवस्थामा कमजोरी नहोस् भनी सबै साथीहरु होसियारीका साथ काम गर्ने गरेका थियौँ ।”
जिल्लामा पोजेटिभ सङ्क्रमित ६ हजार ४१२ जना पुगेका छन् । मृतकको सङ्ख्या १०१ पुगेको छ । ६ हजार ६३ जना निको भएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ । भरतपुर महानगरमा मात्रै ४ हजार ५८९ जना छन् । यस्तै माडीमा १३१, राप्तीमा ३११, रत्ननगरमा ७५७, खैरहनीमा ३९८, कालिका नगरमा १८८ र इच्छाकामनामा ३८ जना सङ्क्रमित देखिएका छन् ।
चितवन जिल्लामा भएका कुल संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशतमा अस्पतालबाट नै कोरोना फैलिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
चितवन जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले केही समय अगाडी गरेको एक अध्ययनका क्रममा संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशतको संक्रमणको माध्यम अस्पताल बनेको पाइएको हो ।
पढ्नुहोस् यसबारे थप समाचार
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमवार, पुस २०, २०७७ १८:५३:४१
यस्ता लक्षण देखिए भने नगर्नुहोस् वेवास्ता, हुनसक्छ ब्रेन ट्युमरको समस्या